အစိမ်းရောင် SCREEN ကိုဗွီဒီယိုကို - ဘာလုပ်ဖို့ - ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကို - 2019
အစိမ်းရောင် screen ကိုဗွီဒီယိုကို - ဘာလုပ်ဖို့
ရိုးရှင်းတဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းအပေါ်လမ်းညွှန်နှင့်မည်သို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှ - သင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအစားကဖြစ်သင့်သောအရာကို၏အောက်တွင်တစ်ဦးအစိမ်းရောင် screen ကိုကြည့်ပါ။ အလွန်အခွအေနေကနေသင်တို့ကို (ဒီအဆက်အသွယ်ကိုအသုံးပြုသည်ဥပမာအားဖြင့်ကဆက်တင်ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး YouTube ပေါ်မှာသုံးနိုငျ) တစ်ဦးကို flash player ကိုတဆင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကစားသောအခါကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
- ဗီဒီယိုအစားက Internet Explorer အတွက်အစိမ်းရောင် screen ကိုမြင်သောသူတို့အားများအတွက် Google Chrome, Opera က, Mozilla Firefox ကို၎င်း, ဒုတိယ၏အသုံးပြုသူများသည်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှု: အခြေအနေဆိုးအားပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်စဉ်းစားလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစိမ်းရောင် screen ကိုပြုပြင်တာတွေ
ဒါကြောင့်အားလုံးနီးပါးက browser များအတွက်သင့်လျော်သောပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပထမဦးဆုံးလမ်းကိုသင် Flash Player ကိုများအတွက် hardware acceleration ကို disable လုပ်ဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အစားအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်၏ပြသသောဗီဒီယို, ပေါ်မှာ Right-click လုပ်ပါ။
"ဆက်တင်များ" (က Settings) ကို Select လုပ်ပါ
(hardware acceleration ကို Enable) "hardware acceleration ကို Enable" deselect
အဆိုပါဖျော်ဖြေအပြောင်းအလဲများကိုပြီးနောက်နှင့် Preferences ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့, ထို browser မှာစာမျက်နှာပြန်တင်ပါ။ ဒီပြဿနာကိုဖယ်ရှားမကူညီဘူးဆိုရငျ, ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများဒီမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်: Google Chrome နှင့် Yandex Browser ကိုအတွက် hardware acceleration ကို disable လုပ်နည်း။
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည် Internet Explorer ကိုအသုံးပြုပြီးကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီလုပ်ရပ်တွေကိုအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ပြီးတော့လာမယ့်အပိုင်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရင်တောင်။
ထို့အပြင် AMD ၏လျင်မြန်စွာ Stream (နှင့်သင်ကသင်ဖျက်ပစ်ရန်ရှိသည်) installed ကြသူအသုံးပြုသူပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီပေးရန်ဘာမှမရှိဘူးကြောင်းတိုင်တန်းရှိပါတယ်။ တချို့ကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလည်းက Hyper-V ကိုကို virtual စက်တွေလည်ပတ်နေသည့်အခါပြဿနာပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
အဘယ်အရာကိုက Internet Explorer အတွက်လုပ်ဖို့
က Internet Explorer အတွက်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည့်အခါဖော်ပြထားပြဿနာပေါ်ပေါက်ပါကအောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူအစိမ်းရောင် screen ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်:
setting များကိုသို့ သွား. (Internet Options ကို)
"အဆင့်မြင့်" ဟုအဆိုပါပစ္စည်းကိုဖွင့်ပါနှင့်စာရင်း၏အဆုံး၌, "အရှိန်အချိန်ဇယား" အောက်မှာ (ဆိုလိုသည်မှာယင်းအမှတ်အသား set) rendering software ကို enable ။
ထို့အပြင်အားလုံးကိစ္စများတွင်ပါကတရားဝင် site ကို NVIDIA သို့မဟုတ် AMD မှသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဗီဒီယိုကားမောင်းသူကို update လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည် - ကမလိုအပ်ဘဲပြဿနာကို disable ဂရပ်ဖစ် acceleration ကိုဗီဒီယိုက fix နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကစားသမား Flash ကိုလျှင်, သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် (ဥပမာ, Google Chrome က) ရုံဘရောက်ဇာပေါ်တွင်ကို Adobe Flash Player ကို reinstall လုပ်ဖို့ - ထိုအခါနောက်ဆုံး, အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်မူကွဲမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။